Iindaba -Izibonelelo ezine zetekhnoloji ye-piezoelectric inkjet technology
Njengoko sonke sisazi, itekhnoloji ye-inkjet ye-foam eshushu ilawula imarike yefomathi enkulu ye-inkjet iminyaka emininzi. Ngapha koko, itekhnoloji ye-inki ye-piezoelectric isete uguquko kwitekhnoloji ye-inkjet. Isetyenziswe kubashicileli bedesktop ixesha elide. Ngokuphuculwa kunye nokukhula kwetekhnoloji, ifomathi enkulu yeepiezoelectric inkjet printers nazo ziye zaphuma kule minyaka idlulileyo.
Njengoko igama libonisa, umgaqo wobuchwephesha be-inkjet ye-thermal foaming kukusebenzisa ukumelana okuncinci ukufudumeza inki ngokukhawuleza, kwaye emva koko kuveliswe amaqamza ukuba akhutshwe. Umgaqo we-inkiet ye-piezoelectric inks usebenzisa ikristale ye-piezoelectric ukwenza ifuthe kwaye ikhuphe i-diaphragm esisigxina kwintloko yokuprinta ukuze i-inki kwintloko yokuprinta ikhutshwe.
Kule migaqo ichazwe apha ngasentla, sinokushwankathela izibonelelo zetekhnoloji ye-inki ye-piezoelectric xa isetyenziswa kwimisebenzi yokushicilela enefomathi enkulu:
(1) Iyahambelana nee-inki ezingaphezulu
Ukusetyenziswa kwemilomo yeepayzoelectric ngemibhobho kunokuba bhetyebhetye xa ukhetha ii-inki zeefomula ezahlukeneyo. Kuba indlela ye-inki ye-foam yokufudumeza ifuna ukufudumeza i-inki, ukwenziwa kweekinki kwe-inki kufuneka kuhambelane ngokuchanekileyo ne-cartridge ye-inki. Kuba indlela ye-piezoelectric inkjet ayifuni ukufudumeza i-inki, ukhetho lwe-inki lunokubanzi.
Eyona mfanekiso ilungileyo le uncedo - isicelo inki sombala. Uncedo lwe-inki yombala kukuba iyamelana ngakumbi ne-UV Radiation kunedayi (idayi esekwe), kwaye inokuhlala ixesha elide ngaphandle. Inokuba nolu phawu kuba iimolekyuli ze-pigment kwi-inki ye-pigment zihlala zihlangana ngokwamaqela. Emva kokuba amasuntswana aqokelelwe ziimolekyuli ze-pigment akhanyiswa yimitha ye-ultraviolet, nokuba ezinye zeemolekyuli zombala zitshatyalalisiwe, kusekho iimolekyuli zombala ezaneleyo ukugcina umbala wokuqala.
Ukongeza, iimolekyuli ze-pigment ziya kwenza i-crystal lattice. Ngaphantsi kwemitha ye-ultraviolet, i-crystal lattice iyakusasazeka kwaye ifunxe inxenye yamandla e-ray, ngaloo ndlela ikhusela amasuntswana ombala emonakalisweni. Eli nqaku libaluleke ngokukodwa.
Ngokuqinisekileyo, inki ye-pigment nayo ineentsilelo zayo, eyona nto ibonakalayo kukuba i-pigment ikhona kwimeko yeengqungquthela kwi-inki. La masuntswana ayakusasaza ukukhanya enze umfanekiso ube mnyama. Nangona abanye abavelisi bebesebenzisa ii-inki zombala kwiiprinta ze-inkjet ze-foam ezidlulileyo, ngenxa yohlobo lwe-polymerization kunye nemvula yeemolekyuli ze-pigment, akunakuphepheka ukuba imibhobho yayo iya kuvaleka. Nokuba ushushu, oko kuya kubangela i-inki. Uxinzelelo kunzima ngakumbi ukuluqonda, kwaye ukuvaleka kunzima kakhulu. Emva kweminyaka yophando, kukwakho nezinye iiinki zombala eziphuculweyo zeeprinta ze-inkjet ze-foam kwimarike yanamhlanje, kubandakanya ukuphuculwa kwe-chemistry ye-ink ukunciphisa isantya sokudityaniswa kwamasuntswana, kunye nokugaya okuLungileyo ngakumbi kwenza ubungakanani beemolekyuli zombala zincinci kunobude bebude be I-spectrum yonke ukunqanda ukusasazeka kokukhanya. Nangona kunjalo, abasebenzisi baxele ukuba ingxaki yokuvala isekhona, okanye umbala womfanekiso usakhanya.
Ezi ngxaki zingasentla ziya kuncitshiswa kakhulu kwitekhnoloji ye-inki ye-piezoelectric, kwaye isiseko esiveliswe ngokwandiswa kwekristal sinokuqinisekisa ukuba umlomo awuthintelwanga, kwaye uxinzo lweinki lunokulawulwa ngokuchanekileyo kuba aluchaphazeli bubushushu. Okanye, inki engqindilili inokunciphisa ingxaki yombala omdaka.
(ezimbini) zinokuxhotyiswa nge-inki yomxholo oqinileyo omninzi Imilomo ye-Piezoelectric ingakhetha ii-inki ezinomxholo ophezulu. Ngokubanzi, umxholo wamanzi weinki osetyenziselwa ukushicilela i-inkjet ye-foam kufuneka ubephakathi kwama-70% nama-90% ukugcina imilomo ivulekile kwaye isebenzisana nefuthe lobushushu. Kuyimfuneko ukuvumela ixesha elaneleyo lokuba i-inki yome kumajelo eendaba ngaphandle kokusasazeka ngaphandle, kodwa ingxaki kukuba le mfuneko ithintela i-thermal foam inkjet printers ekuqhubekeni zisonyusa isantya sokushicilela. Ngenxa yoku, iiprinta zangoku zeepiezoelectric inkjet kwimarike ziyakhawuleza kuneeprinta eziphuphuma amagwebu.
Ukusukela ukuba ukusetyenziswa kwemilomo yeepayzoelectric kungakhetha i-inki ngomxholo oqinileyo, ukukhula kunye nokuveliswa kwemithombo yeendaba engenamanzi kunye nezinye izinto ezisetyenziswayo ziya kuba lula, kwaye imithombo yeendaba eyenziweyo inokuba nokusebenza okuphezulu okungangenwa ngamanzi.
(2) Umfanekiso ucace gca
Ukusetyenziswa kwemilomo yeepayzoelectric kungayilawula ngcono imilo kunye nobungakanani bamachaphaza e-inki, okukhokelela kwisiphumo somfanekiso ocacileyo.
Xa kusetyenziswa iteknoloji ye-inkjet enegwebu eshushu, i-inki iwela kumgangatho ophakathi ngohlobo lokutshiza. I-inki ye-inki ye-inki ye-inki edityanisiweyo idityaniswe nophakathi ngohlobo lweLay. Ngokusebenzisa i-voltage kwikristale ye-piezoelectric kunye nokuthelekisa ubukhulu be-inkjet, ubungakanani kunye nokumila kwamachaphaza e-inki kunokulawulwa ngcono. Ke ngoko, kwisisombululo esifanayo, ukuveliswa komfanekiso ngumshicileli we-inkjet ye-piezoelectric kuya kucaca kwaye kucace ngakumbi.
(3) Ukuphucula nokuvelisa izibonelelo
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji ye-inki ye-inki ye-piezoelectric kungasindisa inkathazo yokutshintsha iintloko ze-inki kunye neekhatriji ze-inki kunye nokunciphisa iindleko. Kwitekhnoloji ye-inki ye-piezoelectric inki, i-inki ayizukufudunyezwa, idityaniswe nomsonto owenziwe yikristale ye-piezoelectric, umbhobho we-piezoelectric ungasetyenziswa ngokusisigxina kwithiyori.
Okwangoku, inkampani Yinghe uzibophelele kwimveliso ngokukhawuleza kunye ngqo piezoelectric abashicileli inkjet. Okwangoku, umshicileli we-1.8 / 2.5 / 3.2 weemitha oveliswe yinkampani yethu wamkelwe ngabathengi abaninzi basekhaya nakwamanye amazwe. Umatshini wethu we-piezoelectric inkjet wamkela ngokuzenzekelayo Ukufakwa kwe-inki kunye nenkqubo yokurola ezenzekelayo kuqinisekisa ukuba imilomo ayinakuphikiswa kwaye nemilomo ihlala ikwimeko entle. Inkqubo ibonelela ngeendlela ezili-1440 zokuchaneka okuphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu. Abasebenzisi banokukhetha izinto ezahlukeneyo zokuprinta. Ukusetyenziswa kwenkqubo yokomisa kathathu kunye nokomisa umoya kunokufikelela ngokukhawuleza Ukutshiza kunye nomsebenzi owomileyo, iindleko zemveliso eziphantsi kakhulu, masenze ngokukhawuleza nangokulula ukufumana imbuyekezo.